Chikumi 20, 2018 arun
Bithumb hacked for $ 31M paachabva withdrawals
Bithumb, mumwe kupfuura cryptocurrency exchanges mu South Korea nekutengeserana vhoriyamu, ari zvokumisa twa dhipoziti uye kushaya mabasa pashure hackers vakaba 35 bhiriyoni Won $31 mamiriyoni pachikuva.
Kambani akati chiziviso nhasi kuti Hack zvakaitika pakati mukupera Chipiri usiku kusvikira Wednesday mangwanani mangwanani Korean nguva. Bithumb akati kuti kurasikirwa ichazadzwa papuratifomu.
Bitcoin guta Slovenia kuti ichapa 450 zvitoro kuti vagamuchire Bitcoin
A 'Bitcoin City' anotarisirwa kuvhura muLjubljana, ndokuwarira pamusoro 250,000 mativi metres uye chokuzvirumbidza kupfuura 450 zvitoro uye dzimwe cryptocurrency chokuita Amenities kuti zvose vanobvuma Bitcoin semubhadharo.
Kunze kunotenga nehoro, Bitcoin guta (BTC) achava neimba 70 nembariro uye mumaresitorendi, 17 kushambira madziva, mumwe Mini-gorofu kosi, munhu waterpark uye varaidzo muzinda ane 3D mabhaisikopo uye Crystal Palace, inonyanya shongwe kuSlovenia.
Tether kuti US dollar reserves iongororwe & zvabuda rakabudiswa
Kwekutanga gore rino, Tether akaripira mutemo chakasimba aite randomized vakaongorora uwandu Tethers wechiGeorgian, uyewo currency reserves.
The makasimba akapiwa simba rokuita risingaperi bvunzo yacho zviyero pa nemabhengi Tether uye aongorora mazana mapeji magwaro akakodzera. The zvichiguma “pachena mushumo” yava kubudiswa
Remangwana cryptocurrency unomutenda
Zvakaratidzwa kuti haasi munhu wose anoda kubhadhara mitero yake Bitcoin Holdings oga zvikonzero kana kuti nefarious nezvikonzero. zvisinei, ari IRS angangotadza kuchinja mafungiro ayo akananga pakurapa cryptocurrency sezvo pfuma. Ndiyo imwe nyaya kuti anenge akakonzerwa nharo zhinji kare uye zvichida kuramba kwenguva yakati.
saka, zvose vanhu muUnited States anofanira kubhadhara mitero yavo cryptocurrency inventories uye upfumi. zvisinei, pane kuwedzera kutsvaka zvinogadzirisa kuti vari pamutemo asi kubvumira vanoshandisa (zvinenge) kudzivisa nemitero vangadai zvimwe pachena kuti. Sezvo nguva dzose zvazviri mari ichaita, pamutemo pokunzvenga napo dzinogona kuwanikwa kuburikidza tsvakurudzo akakodzera, Kanenge kusvikira IRS anosarudza kugadzirisa navo.
An dzinonakidza kukurukura kuchangobva Vakakurukura cryptocurrency unomutenda. A crypto mari kuvimbana iri kuvimba somumwe ari chikamu dzemari, asi rine chete crypto mari pfuma. Kunyange zvazvo motokari idzi dzichiri pasi mitero, pane dzimwe nzira kuderedza kana apikise mitero. Ichi hachisi chimwe chinhu chinofanira kushungurudzwa angambosvika sezvo IRS achaita pakupedzisira kufumura kwokunyepedzera maitiro.
Mhando Separate kuti anovimba vangazivikanwa. Pane kuvimba chipenyu asina kunonyorwa yoga. Kuchinjwa Bitcoin kana mumwe cryptocurrency kuti kuvimba kwakadaro hakusi taxable, sezvo mupenyu kuvimbana haisi yoga taxpayer. Chimwe mhinduro ndiyo asiri grantee kuvimba, apo transferor hauna kunonyorwa. zvisinei, kuvimba pacharo mubayiro mitero uye kuparadzira anogona kunonyorwa yoga.
An mukana kuzowanikwawo anenge cryptocurrency zvose nokuchengetesa ndechokuti chokuita mitero hurumende. Forbes achangobva vakasuma vamwe dzinonakidza yokutevedzera panyaya iyi, sezvo vamwe inoti vari nani nzvimbo pane vamwe kuti yakawanikwa nokuchengetesa dzakadaro. New York zvakajeka havanyanyi kukwezva panyaya iyi sezvo vanodzika mitemo yayo vanonyatsoziva izvi “kunyengerai pamutemo” uye munoziva kuti zvinogona kubatsira cryptocurrency vanoshandisa. Mamiriro New York haasi cryptocurrency kwenguva yakati.
Kunyange zvazvo cryptocurrency vanovimba kunogona kuva shoma zvinonakidza mikana, kuri pachena kuti pane njodzi zhinji. Kudzivisa mitero chero mhando, kunyange zviri pamutemo rinoreva, anogara ngozi nokuda crypto mari vanoshandisa, uye hazvina hazvo zviripo. Kana pachava kufarira cryptocurrencies anoramba kuti kuonekwa.
Ethereum Wallet ImToken ane $ ...
Previous Post:History wokutanga cryptocurrency